रबि लामिछानेले कति जिते करोडपती कार्यक्रममा ! EXCLUSIVE अन्तरबार्ता ( भिडियो सहित ) – ThikThak News
नेपालकै सबैभन्दा बढी पुरस्कार राशी भएको कार्यक्रम ‘ को बन्छ करोडपति ‘ मा रबि लामिछाने ले आफ्नो सहभागिता जनाएका छन्। देशकै दुर्गम कालिकोटको रास्कोटमा निर्माण भैरहेको रास्कोट अस्पतालका लागि सहयोगार्थ उनि कायक्रममा सहभागिता जनाएका थिए। रबि लामिछाने फाउन्डेसन द्वारा निर्माण हुदै गरेको अस्पताललाइ सम्पन्न गर्न को बन्छ करोडपतिले सहयोगार्थ कार्यक्रम बनाएको हो। कार्यक्रममा सकेसम्म १ करोड रकम नै जित्ने हिसाबले खेल्ने भन्दै यस अघि नै रबि लामिछानेले आफ्नो फेसबुक मार्फत सबैलाई जानकारी दिसकेका छन्। करोड जित्न नसकेपनि सकेसम्म बढी रकम जितेर अस्पताल निर्माणमा लगाउने रविको योजना रहेको छ।
कार्यक्रममा रबि लामिछानेले सहभागिता जनाउन गैरहदा केहि समस्या पनि भएको थियो। आयोजकले कार्यक्रम गर्न ढिलाई गरेको भन्दै रबि लामिछानेका फ्यानहरुले आक्रोश समेत पोखेका थिए। उनीहरुले फेसबुक मार्फत कार्यक्रम को फ्री टिकट पाएका थिए । आफुहरुलाइ रात को समयमा टाढा टाढा पुग्न समस्या हुने भन्दै आक्रोश पुखेका थिए। पानि समेत परेको समयमा बाहिर नै रखिएको मा उनीहरुको गुनासो थियो। पछि रबि लामिछानेले आएर उनीहरुलाई संयम भएर बस्न आग्रह गर्न परेको थियो। आफुहरुलाई ६ बजे बोलाएपनि कायक्रम ढिला हुदा आफुहरुलाई समस्या परेको बताइरहेका थिए। अघिल्लो कार्यक्रम ले केहि बढी समय लिदा को बन्छ करोड पति पछि सरेको थियो।
रबि लामिछानेले कार्यक्रममा कति रकम जिते भन्ने बारेमा पत्रकार हरुले सोधेको प्रश्नमा हासेर टालीदिएका थिए। यो कुरा अहिले लाइ गोप्य नै राखौ भन्दै उत्तर दिन चाहेनन् तर आफुले कार्यक्रममा गीत गाएको र पक्कै हेर्नुस भन्दै आग्रह पनि गरे। नायक राजेश हमाल संग लामो समय पछि भेटघाट भएको र रमाइलो अनुभब भएको प्रसंसा गरे। रबिको नेतृत्वमा निर्माण हुदै गरेको अस्पतालका लागि अहिले सम्म देश तथा विदेश बाट उदार मनका धनि नेपालीहरुले करोडौ सहयोग गरिसकेका छन् र सहयोग गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यसै क्रममा को बन्छ करोडपति कार्यक्रममा सहभागी बनेर अस्पताललाई थप रकम जुटाउने काममा रबि लागेका हुन्। हेर्नुस भिडियो मा
यसरि धुम मचाए सागर आलेले हङ्गकङ्गमा, झुमे दर्शक
रवि लामिछानेलाई दिनेश डिसीको सुझाव - पुलिस र वकिल जस्तो होइन पत्रकार बन्नुस्
निर्मलाको न्याय माग्दै उर्लियो जनसागर, डिएसपीसहित ६ प्रहरी आज निलम्बित ( भिडियो )
Previous Article तपाइको आज बिहिबारको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस तपाइको राशिफल
Next Article एनसेलको नाफा घट्यो, यस्तो रहेछ कारण